Kulan duco ah oo wariye C/Qadir.M.Mursal loogu sameeyay Nairobi+”Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Kulan duco ah oo wariye C/Qadir.M.Mursal loogu sameeyay Nairobi+”Sawirro”
Kulan duco ah oo wariye C/Qadir.M.Mursal loogu sameeyay Nairobi+”Sawirro”
Kullan loogu duceenayay Allaha u naxariistee, Wariye Cabduqaadir Maxamed Mursal oo dhawaan ku geeryooday dalka Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarrunta wadanka Kenya.
Kullanka oo ay ka soo qeybgaleen inta badan wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa loogu duceenayay, isla markaana lagu xasuusanayay AUN, Wariye C/qaadir Maxamed Mursal oo kamid ahaa rugcadaayaasha saxaafadda Soomaaliyeed balse dhowaan ku geeriyooday wadanka Mareykanka.
AUN, Wariye Mursal ayaa ka mid ahaa wariyayaashii ka soo shaqeeyay Radio Muqdisho, isagoo sidoo kale mar aan sii fogeen ka soo shaqeeyay Raadiyaha arrimaha bini’aadanimmada ka hadla ee Ergo ee fadhigiisu yahay magaalada Nairobi oo uu madax ka ahaa,qaar ka mid ah dadkii ay sida dhow u soo wada shaqeeyeen AUN, Wariye C/qaadir Maxamed Mursal ayaa ka sheekeeyay aqoonta ay u lahaayeen iyo waxyaabaha ay ku xusuustaan.
AUN, Wariye C/qaadir Maxamed Mursal ayaa 30 kii bishaan ku geeryooday wadanka Mareykanka, halkaas oo uu ku xanuunsanaa muddooyinkii dambe, iyadoo geeridiisana ay ka tacsiyadeen dhammaan bahda saxaafadda Soomaaliyeed.
Previous articleTaliska nabad-sugidda Jubbaland oo soo saaray digniino.
Next articleGuddiga doorashooyinka Jubbaland oo gaaray Afmadow.